Umatshini wokucoca oomileyo onokuthi umthengi angabizi
Isikhundla samanje: Ikhaya -> Iindaba zokuLondolozwa kweeNkunkuma eziMileyo
Umatshini wokucoca omile? Ukucoca ngokucokisekileyo njengemveliso yelanga, kuquka nokukhulelwa amathuba amaninzi ebhizinisi, abasebenzi abafudukayo bafuna ukuqhuba okanye bafuna ukuba ne-investors abazinzileyo bayakhethwa ukuvula abacocekisi abomileyo. Uyazi ukuvula abacocekisi abomileyo into yokuqala yokuyenza kukuba ukhethe abacoca abacocekileyo, abenzi bokucoca abatshizi bezitshizi kwiimarike kakhulu, ngoko ke abacoca abacoca abancinci?
Ukufuna ukuqhubela ekhaya ukwenza imali yokomisa i-cleaners akuyona into elula, nangona i-shishini kunye neeprojekthi kukhethwa okulungileyo, kodwa kuphela ezimbalwa ngenxa yokuvula abacoceli abomileyo ukucoca oku kwale yolwazi, ininzi yabantu abanakho iteknoloji , usethe ivenkile kwixesha elidlulileyo abantu abathile abazimeleyo, kaninzi abanakho ukukhetha ukujoyina i-brand yeevenkile yokucoca ivenkile. Phanda isizathu sayo, izitoreli ezizimeleyo ezingenalo izixhobo, inkxaso yetheknoloji yekomkhulu, kule mimandla emva kwoshishino. Ukuba nekomkhulu labo kwimeko yokungabikho kwenkxaso yokubuyisela inkxaso kunye nenkxaso ye-napa egcinwe ngokusemthethweni kwi-teknoloji, izixhobo, iinkonzo, ukuhlaziywa akukho.
Xa ukhetha ucoceko ococekileyo lwe-franchise brand ufuna ukuqwalasela kwiindlela ezininzi ezahlukeneyo, ungayilandeli ngokungaqhelekanga, into yokuqala yokuqwalasela ukujoyina uhlobo olunjani lweemveliso eziza kwenza ukuba utyalo-mali lwazo luzuze ngcono. Ukucoceka okumeleyo ukudibanisa into yokuqala yokuqwalasela ngamandla kunye nesigama samashishini, idumela kunye namandla enkampani akukho mfuneko yokujoyina, okwesibini kukubona izixhobo kunye neteknoloji inokwethenjelwa, iphambili, ingaba inokubonelela ngamalungu aphezulu izixhobo zokucoca kunye neteknoloji yokucoca.
Utyalo-mali ococekileyo kunye noomnye amashishini, kukho izinto ezininzi zokuqwalasela, ngokucokisekileyo ukuqwalasela izinto ezihlukeneyo, ukulungiselela isisombululo, kunokutsalwa kwintlawulo-mali.
Abacoca abacocekileyo abancinci? Ukudibanisa ikhenketho ENEJEAN ukuhlamba ngokucoca ngokucoca iprojekti yokucoca imveliso ngokuzimeleyo yocwaningo oluzimeleyo kunye nophuhliso, imveliso yechungechunge lwefom, kwaye lusekuphuhliseni rhoqo kwintsebenzo. Umoya wokubambisa oshishino, luhlobo oluthile lokucoca utyalo-mali abanethamsanqa, kuba ukuba xa bejoyina ikomkhulu asinalo uphuhliso oluzinzile lweemveliso, inkonzo, ukuqeqeshwa, ikhono leqela, xa ubugcisa bekhompyutha bukhona, kancinci abakwazi ukuhlangabezana neemfuno zabathengi, ukucocwa ukujoyina ukusetyenziswa kwekhonkco kuya kubangela iingxaki.
Ukucoca i-dryer engabizi? I-ENEJEAN yokuhlamba ixabiso le-washer elomileyo lingaphantsi kwexabiso lemarike, ukwenzela ukuba abanye abatyali-mali bangene kwimarike yokucoca, ke ngoko kuhlamba i-ENEJEAN ukunciphisa umda, iintlobo ezili-15 zokucoca ngokucoca utyalo-mali lokuqulunqa, abatyali abacoca ngokuncinci abatshali-mali kuphela badinga i-30000 yuan i-RMB utyalomali kwinqwelo elincinci elitshiweyo, elixhotyiswe ngee-othombileyo ioli ecocekileyo, i-dryer, i-dryer, i-ironing table kunye nezinye iintlobo ezinhlanu zokucoca.
I-ENEJEAN inzuzo yokuhlamba ayiyi kuyeka apho, nangona kunjalo, inika kwakhona i-free jiamingfei yamahhala, inika ukuqeqeshwa kwe-teknoloji yokucoceka ehambayo yamahhala kunye nolwazi, kunye nezixhobo zokugcinwa kwezixhobo, ekupheleni kwezi nkonzo kunceda ukucoca utyalo-mali abatshayi nje kuphela ukunciphisa indleko yotyalo-mali, kunye nenkqubo eninzi efanelekileyo, yenza umqhubi angabandakanywa ekuphuculweni kweemakethi.
Inqaku lokugqibela: Lapho izixhobo zokucoca ezinom...